Workers at the Zimbabwe wildlife rescue center Wild is Life are seen outside Harare, Sept. 23, 2020, dancing in the Jerusalema Dance Challenge, a South African internet craze that has gripped the continent (Columbus Mavhunga/VOA)
"I think we have already — we have had an amazing response. We didn’t expect that to happen at all, that it would go viral. I hope it will spread further and get more people involved in the challenge. But really, it is about — for us particularly — it is about spreading awareness about animals and the sentience of animals and the importance of animals for national heritage, basically for our children and for our country," she said.
Danckwerts said she hopes it will help support Zimbabwe’s wildlife tourism industry.
Like much of Africa, Zimbabwe’s tourism industry has been suffering since the pandemic began in March. But even before the pandemic, Zimbabwe struggled to attract visitors.
Godfrey Koti, the spokesman for the Zimbabwe Tourism Authority, said the pandemic has brought the industry worldwide to “ground zero” and it is time for Zimbabwe to take off.
Zimbabwe has seen triple-digit inflation, adding to the country’s economic problems. Tourism is one of the industries Zimbabwe hopes will revive the country’s struggling economy.